Muuqaal iyo kuxirnaan suuqyo hal mar ah - hal nasiin nasiib wanaag?
Isaga iyo muuqaalka suuqyada hal mar
Sideen si sax ah u sii wadi karaa?
Dhamaan xaqiiqda, dhamaantood?
Tirada lamaanayaasha ayaa ka sarreeya maanta. Mid ka mid ah niyad-xumo qallafsan ayaa ka danbeeya, sheegashooyinka kale ee aad u sarreeya. Qaar badan oo kale ayaa si aan toos ahayn ula qabsan ama waxay haystaan ​​waqti adag inay la kulmaan qof. Noocyo badan oo intaa ka badan ayaa isku dayaya habka casriga ah ee lagula xariiro internetka. Goobaha internetka ee internetka ah waa kuwo aad u jecel.
Dareen mar iyo hadda
Markii hore wuxuu raadinayay "qeybtii labaad" wuxuu noqday mid aad u adag, nolosha dhabta ahna wuxuu ku xiran yahay goobta shaqada ama goobo saaxiibo ah, oo laga helo internetka, waxaa jira waxyaabo badan oo suuro gal ah maanta. Xitaa xitaa la taaban karo, laakiin xeelad foolxun ah dhalinyaro da 'yar ayaa horey u helay isaga - inta badan la xajiyey - Dulcinea.
Baro inaad shirtid
Waayo, macaamiisha ah 55 + iyo xanniban tahey at dhan loogu talagalay dadka ka xishoon ama mashquul sida maamulayaasha, iskaa u shaqeysato, taas oo ay qaataan waqti yar ama rabitaan inuu baxo, ballan fursado cusub ayaa adeegyada shukaansiga online mahad furay ilaa. Xaggee ayuu 60-kicin jiraa oo ku hadlaya gabadha ku jirta guriga qaxwaha maanta? Thanks to Internet, xitaa dib u celin waa suurtagal. Wakhti dheer hadda, haweeneydu ma sugto in ay sugto in lala xiriiro, laakiin waxaa loo oggol yahay in ay iskii bilaabaan.
Nolosha dhabta ah, fursadaha kalkaalisada, tusaale ahaan, waxay la kulmaan oo jecel yihiin arday aqoon leh, laakiin aan qiimo lahayn oo leh danaha dhaqameed, waxay ku dhow yihiin sida eber. Internetka ayaa suurtogal u ah!
search Sidaas hareen waayo qofka xaq daro Internet sidoo kale loo isticmaalaa in ay si fudud ay tahay, nasiib darro, in la wado maanta la profiles Single iyo dabacsan iyo niyad kali daacad ah doonaya.
Ragga qaarkood waxay inta badan ku wareeraan boggaga shukaansiga iyagoo leh liis garayn boosto waxayna u maleynayaan inay kaliya ay tahay inay "dalbado" haweeney. Profiles, oo og dooneysa ka kooban yahay iyo shuruudaha on taribuunka hal habeen, Sexbeziehung iyo gaalnimo, waxaa sii kordhaya. Tan iyo maanta maantana qof kastaa wuxuu leeyahay internet-ka, heerarka nuxurkiisu wuu boobaa, qaar ka mid ah dumarka dhibka yar ayaa leh. Xitaa is-weydaarsiga hal-galmoodka ah, kuwaas oo ay tahay inay bixiso adeegsiga adeegyada, heerkulku wuu degayaa, tirada dadka diiwaan-gashan oo aan qarsoodi lahayn, ayaa kor u kacay.
Diiwaangelinta isgaadhsiinta badan iyo moodooyinka madadaalada iyo sidoo kale maaha noocyo halis ah oo ay ka kooban tahay sida: "Waxba raadin maayo. Anigu waxaan eegaa hareeraha "waa mid aan wax tar u lahayn. Marka laga soo tago, inkastoo ay hoos u dhaceen iyo fake badan, tirada xiriirada iyo helitaanka jilayaal badan oo badanaa laga yaabo inay ugu sarreeyaan halkan. Daacad raadin hal mar ah ayaa badanaa eegaya faraha halkan.
Sabirsanaanta, laakiin waxay qaadan kartaa wakhti leh goobo shukaansi ah!
Dadka dhowaan yimid waxaa badanaa laga badiyaa waraaqaha iyo booqashooyinka bogga. Lamaanayaashu waxay kaligood heli karaan kumanaan nooc oo kali ah oo leh dhowr jeer oo xiriir ah oo xiriirka joogtada ah leh, tani waxay u egtahay midka caan ah ee ka baxsan sharciga.
group A da'da adag wakiil 36- si 45 sano kali, ma aha oo kaliya in nolosha dhabta ah ay tahay. Laakiin waa dhigooda suurto gal ah sida caadiga ah lagu daro qoyska trust a iyo abaal ama aan weli diyaar u wareega labaad.
Maxaa la sameeyaa marka saaxiibka ugu fiican uu noqdo jacayl?
Si aad u raadisid culus waa inaad u caddaysaa fikradaada iyo rabitaankaaga. Si kastaba ha noqotee, mid waa inuu filaa inuu la xiriiro dad aan wali dhamaystirin sheekadii hore. Si deg-deg ah ayaa midba midka kale u noqonayaa "joogsade".
Suuqyo kali ah oo internetka ah
Intaas waxaa sii dheer, mid waa in la diyaariyaa in Cadonis uu sheeganayo taariikhda ugu horeysa ee sawirkiisa sawirkiisa uu leeyahay muuqaal yar oo yaryar.
Si kastaba ha ahaatee, inkastoo aan la aqoonsan, waa in qofku had iyo jeer la dhaqmo sharafta iyo ixtiraamka.
Kuwa ugu khatarsan ayaa gaar ahaan miisaanka iyo da'da. Waxaa intaa dheer, ragga ayaa leh dhibaatooyin ay ku gartaan timahooda qallafsan. Dumarku waxay jecelyihiin inay khiyaameeyaan kilinkooda. Sidaa daraadeed badanaaba waxay dhacdaa in aan xaqiiqo ahayn, inta badan horayba sawirada 10 sanadihii waa la bedelay.
Jaahwareerka taariikhda koowaad waa sidaas lama huraan.
Noloshu ma aha codsi dalbasho, mana ahan mid dhab ah ama internetka. Haddii mid ka mid ah waa ogyahay this iyo faa'idaysanayo farshaxanka weyn ee wada hadalka, is-dhaafsiga iyo helitaanka in la ogaado mid kasta haddii tirada kali suuqa saamiyada iyo fursadaha ay, waa farxad a suurto gal ah iyo wax badan oo is-aragnimo waxba jidka.
Waxaa laga yaabaa in aad tahay bukaano badan.